မတိုင်မီနှင့်ပြီးနောက် 10 ရက်အစာအာဟာရကိုသောက်သုံးခြင်း | တရားဝင် site Keto Eat&Fit
Keto Eat&Fit တရားဝင် site
အချိုရည်များပေါ်၌ကိုယ်အလေးချိန်ကျစေခြင်း၊ အစားအစာကိုမီနူးဖြင့် ၁၀ ရက်သောက်ခြင်း
6 မတ်လ 2021
ချောမောတဲ့အမျိုးသားတွေကမင်းကိုသတိမထားမိကြဘူးလား။ဒီဆောင်းပါးပါနည်းစနစ်ကိုပါးနပ်စွာနဲ့ရယူပြီးအရာအားလုံးပြောင်းလဲသွားလိမ့်မယ်။လူအများအတွက်အလှအပနှင့်လိုက်ဖက်ညီသောအကျိုးဆက်များနှင့်သဟဇာတဖြစ်သည့်ပျော်ရွှင်မှုကိုရှာဖွေရာတွင်လူအချို့သည်ခက်ခဲသော်လည်းထိရောက်သောကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်းကိုပိုမိုနှစ်သက်ကြသည်။၁၀ ရက်ကြာအစားအသောက်များကိုသောက်ခြင်းသည်ကိုယ်အလေးချိန်ပိုတက်စေသည့်အပိုပေါင်များကိုဖယ်ရှားပစ်သည့်နည်းများကိုရည်ညွှန်းသည်။အပိုစင်တီမီတာသည်ခါးနှင့်တင်ပါးမှထွက်ခွာရန်အတွက်ကယ်လိုရီနည်းသောအချိုရည်များသောက်ရုံနှင့်မလုံလောက်ပါက၎င်းကိုကျွမ်းကျင်စွာသင်လုပ်ရန်လိုအပ်ပြီး၊ အချို့သောစည်းမျဉ်းများကိုလိုက်နာပြီးရလဒ်ကိုနှစ်သက်ပါလိမ့်မည်။
ဤနည်းလမ်းတွင်ကယ်လိုရီနိမ့်အချိုရည်ကိုသောက်ရန်အစိုင်အခဲအစားအစာများကိုလုံးဝငြင်းပယ်ခြင်းပါ ၀ င်သည်။အစားအစာကိုဖန်တီးသူတွေလုပ်ခဲ့တယ် အဓိကအလေးထားသည်မှာဤအင်္ဂါရပ်ကိုအဓိကထားခြင်းဖြစ်သည်။ အကြောင်းမှာ၎င်းတို့သည်စိတ်ဖိစီးမှုကိုဖမ်းဆီးခြင်းသည်ပုံသဏ္mostာန်အများစုကိုထိခိုက်စေသည့်စံဖြစ်လာသည်ဟုသူတို့ယုံကြည်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဒါ့အပြင်အစားအစာဝါးတာနဲ့အစာစားချင်စိတ်တိုးလာတာကြောင့်လူတစ် ဦး သည်သူလိုချင်တာထက်ပိုပြီးမစားဘဲစားသည်။
အစိုင်အခဲအစားအစာများကိုရှောင်ခြင်းသည်အစာခြေစနစ်အပေါ်ကောင်းကျိုးသက်ရောက်စေသည်။သူမသည်နေ့လည်စာစားရန်၊ အဖြူရောင်ပေါင်မုန့်ကိုစားသော ၀ က်သားကြော်ကြော်အဆုံးကိုနာရီပေါင်းများစွာအစာကြေရန်မလိုတော့ပေ။အစာခြေစနစ်သည်တဖြည်းဖြည်းကုန်ချပြီးဇီဝဖြစ်စဉ်ဖြစ်စဉ်များပိုမိုကောင်းမွန်လာပြီးအစာအိမ်အရွယ်အစားကိုလျှော့ချပေးသည်။ ၎င်းသည်ပုံ၏အခြေအနေအပေါ်အပြုသဘောသက်ရောက်စေသည်။
အရည်များများစားခြင်းနှင့်အစားအသောက်တွင်လတ်ဆတ်သော "ဟင်းလျာများ" ၏လွှမ်းမိုးမှုကြောင့်ရေဆားဇီဝြဖစ်စပြုသည်။၎င်းသည်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိဖြစ်စဉ်များကိုသာမကကောင်းမွန်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည် - အသွင်အပြင်လည်းပြောင်းလဲသွားသည်။လူတစ် ဦး သည်ရှည်လျားသောကာလအတွက်အပိုပေါင်အဖြစ်လက်ခံနိုင်သော puffiness ကိုဖယ်ရှားပစ်သည်။
အရေးကြီး:ဂန္ထဝင်ပုံစံဖြင့်အရက်သောက်သောအစားအစာကိုရက်ပေါင်း ၃၀ ကြာဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်၊ သို့သော်ဆရာဝန်များကသင့်ကိုယ်ခန္ဓာတွင်ထိုကဲ့သို့သောစမ်းသပ်မှုများကိုစီစဉ်ရန်မအကြံပြုပါ။
တိုတောင်းသောအစားအသောက်များ - ၁၀ ရက် (အောက်တွင်ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်ကိုကြည့်ပါ) သည်သင့်ကိုပိုပေါင်အနည်းငယ်လျော့။ သင့်ကျန်းမာရေးကိုမထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်လက်ခံနိုင်ဖွယ်ရှိသည်။များသောအားဖြင့်ယင်းကဲ့သို့သောအစားအစာကို ၅-၇ ရက်ကြာလိုက်နာရန်အကြံဥာဏ်ပေးသော်လည်းဆယ်ရက်သောက်သုံးရန်လည်းခွင့်ပြုသည်။
မီနူးအမျိုးမျိုးကိုပြုလုပ်ရန်လိုအပ်ပြီး၎င်းသည်ရေနှင့်ကဖျာများသာပါဝင်ခြင်းမရှိပါကမဟုတ်လျှင်ခန္ဓာကိုယ်ကပြတ်တောက်သွားပြီး၎င်းသည်တစ်ပြိုင်နက်တည်းဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများဖြစ်သည့်ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ အားနည်းခြင်း၊ မူးဝြေခင်းနှင့်ပင်ပန်းခြင်းစသည့်လက္ခဏာများဖြင့်လိုက်ပါလာသည်။
(မတိုင်မီနှင့်ပြီးနောက်) သောက်သုံးသောအာဟာရကို ၁၀ ရက်လုံးလုံးစည်းမျဉ်းများကိုလိုက်နာရန်လိုအပ်သည်။မစတင်မီရေခဲသေတ္တာနှင့်ဗီရိုများမှအရသာရှိပေမယ့်အန္တရာယ်ရှိသောအရာအားလုံးကိုဖယ်ရှားရန်သင့်ကိုယ်ပိုင်မီးဖိုချောင်တွင်စာရင်းစစ်တစ်ခုလုပ်သင့်သည်။မျက်စိမှိတ်။ ကြည့်လိုက်လျှင်၊ များစွာသောအစားအစာများအတွက်သင့်တော်ပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သင်တားမြစ်ထားသောစာရင်းမှထုတ်ကုန်တစ်ခုသို့အဆက်မပြတ်ဝင်မလာလျှင်၊ နှောင့်ယှက်ခြင်းမရှိဘဲတင်းကျပ်သော menu ကိုထိန်းသိမ်းရန်ပိုမိုလွယ်ကူလိမ့်မည်။
အရေးကြီးချက် - ဝါးရန်လိုအပ်သောမည်သည့်အစားအစာကိုမဆိုသောက်စားခြင်းအကျင့်၌စွဲမြဲစွာမစားသင့်ပါ။
အနက်ရောင်၊ အစိမ်းရောင်သို့မဟုတ်ဆေးဖက်ဝင်အပင်များလက်ဖက်ရည် (အိတ်များထဲတွင်သဘာဝမဟုတ်ဘဲသီးသန့်သီးသန့်)၊
သဘာ ၀ သစ်လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်စိုက်ထားတဲ့အနက်ရောင်ကော်ဖီ (တစ်နေ့တစ်ကြိမ်)၊
သကြား - ကိုကိုး၊
သကြားမပါသောသစ်သီးများ၊ သစ်သီးဝလံများ၊ သစ်သီးဝလံများမှသကြားမပါသောဖျစ်ညှစ်ထားသောဖျော်ရည်များကိုသောက်ပါ (သောက်ပါကအာရုံစူးစိုက်မှုသိပ်မရှိပါကသန့်ရှင်းသောရေဖြင့်ရောစပ်သည်);
ဖျော်ရည်၊ သစ်သီးများ၊ သစ်သီးများ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ စီရီရယ်၊
လတ်ဆတ်သောသစ်သီးဖျော်ရည်နှင့်သကြားမပါသောသစ်သီးဖျော်ရည်များ (ဆောင်းရာသီအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားခြင်းမရှိ၊ စတိုးဆိုင်တွင်မ ၀ ယ်ပါ); ဓာတ်မပါဘဲဂျယ်လီ;
အမဲသား၊ ကြက်၊ ငါးများနှင့်ချက်ထားသောဟင်းရည်၊
၂. ၅% ထက်နည်းသောအဆီပါဝင်သောနို့နှင့်အဆီပါဝင်မှု ၁% ထက်မပိုသောနို့အချိုရည်များ၊
ကယ်လိုရီနည်းသောအချိုရည်များအပြင်သင်သည်သန့်စင်သောကာဗွန်နိတ်မဟုတ်သောရေအမြောက်အမြားကိုတစ်နေ့လျှင်အနည်းဆုံး ၈ ခွက်သောက်သုံးနိုင်သည်။၎င်းကိုနေ့တစ်ရက်အတွက်ရွေးချယ်ထားသောအရည် "ပန်းကန်" (သို့) သင်ဗိုက်ဆာသည့်အခါတိုင်းမူးယစ်ဆေးဝါးဖြင့်အစားထိုးနိုင်သည် (၎င်းသည်အရက်သောက်ချိန်တွင်ဖြစ်လေ့ရှိသည်) ။
အချိုရည်အားလုံးသည်ဆားနှင့်သကြားမပါဘဲပြင်ဆင်ထားသဖြင့်သင်သည် "ဟင်းလျာများ" ၏ရိုးရိုးရှင်းရှင်းအရသာကိုခံနိုင်ရမည်ဖြစ်သည်။နောက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုမှာသဘာဝအမွှေးအကြိုင်များထည့်သွင်းခြင်းဖြစ်သည်၊၎င်းမှာသစ်ကြံပိုး၊ ဂျင်း၊ သံပုရာဖျော်ရည်၊ ပညာရှိ၊ ပင်စိမ်း၊ စမုန်ဖြူနှင့်အခြားဆေးဖက်ဝင်အပင်များဖြစ်သည်။တစ်ခါတစ်ရံသင်၏လက်ဖက်ရည်သို့မဟုတ်သစ်သီးဖျော်ရည်ကိုသဘာဝပျားရည်ဇွန်းတစ်ခွက်ထည့်နိုင်သည်။
လူတိုင်းသည်ကိုယ်အလေးချိန်ကျစေသည့်အချိန်ကာလတစ်ခုလုံးအတွက်သက်သောင့်သက်သာရှိသောမီနူးတစ်ခုကိုခွင့်ပြုထားသောအချိုရည်များစာရင်းအတိုင်းလမ်းညွှန်နိုင်သည်။အစားအစာတစ်ခုစီအတွက်အမျိုးမျိုးသောအရည် "ဟင်းလျာများ" ကိုသင်ပြင်ဆင်နိုင်သည်။သစ်သီးနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များနေ့ကို bouillon သို့မဟုတ်အချဉ်ပေါက်သည့်နို့နှင့်အစားထိုးခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သော်လည်းလူတိုင်းသည်မိမိအတွက်အကောင်းဆုံးစနစ်ကိုရွေးချယ်ကြသည်။
ခန့်မှန်းခြေခက်ခဲသောသောက်စရာအစားအစာမီနူး ၁၀ ရက်ခန့်၊ဤပုံစံနှင့်တူသည်။
၁ ရက် - အဆီပါဝင်သောအဆီပါဝင်သောအဆီပါဝင်မှု ၂. ၅% အထိပါဝင်သောနို့၊ (ပျားရည်သို့မဟုတ်သစ်ကြံပိုးထည့်နိုင်သည်)၊ အချဉ်ပေါက်သောနို့အချိုရည် (ကဆီဖရမ်၊ အချဉ်ပေါက်သောနို့၊ ဒိန်ချဉ်) ၁% ထက်မပိုစေဘဲ၊
နေ့ ၂ - အရသာနှင့်အစိုင်အခဲအစားအစာအမှုန်များမပါဝင်ဘဲဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ မှို၊ အသား၊ ကြက်သား၊ ငါးဟင်းရည် (အပျော်တမ်းအတွက်နောက်ဆုံးရွေးချယ်မှု);
နေ့ (၃) - သကြားမပါသောဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ သစ်သီးများနှင့်သစ်သီးများမှသကြားမပါသောလတ်ဆတ်သောညှစ်သောအရည်နှင့်ဖျော်ရည် (သောက်ပါကအချဉ်ထွက်လျှင်ရေနှင့်ရောသည်);
နေ့ (၄) သကြားမပါသောအနက်ရောင်၊ အစိမ်းရောင်သို့မဟုတ်ဆေးဖက်ဝင်အပင်များလက်ဖက်ရည်၊ လိုချင်လျှင်ဖန်ခွက်တစ်ခုထဲသို့ဂျင်းအမြစ်အနည်းငယ်ကြိတ်ကာသံပုရာတစ်ခွက်ထည့်နိုင်သည်။
နေ့ ၅ - လတ်ဆတ်သောသို့မဟုတ်အခြောက်လှန်းထားသောသစ်သီးများနှင့်သကြားမပါသောသစ်သီးများ၊
နေ့ ၆ - သစ်သီးများ၊ သစ်သီးများသို့မဟုတ်သီးနှံများမှဂျယ်လီ၊ လိုချင်လျှင်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဟင်းရည်သို့မဟုတ်စင်ကြယ်သောဟင်းချို၊
နေ့ ၇ - သစ်သီးများ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များနှင့်သစ်သီးများမှလတ်လတ်ဆတ်ဆတ်ညှစ်ထားသောဖျော်ရည်၊
နေ့ ၈ - နို့နှင့်အချဉ်ရှိသောနို့အချိုရည်များ၊
နေ့ ၉ - အသားသို့မဟုတ်ကြက်သားဟင်းရည်၊
နေ့ ၁၀ - ဓာတ်ငွေ့မရှိဘဲအကန့်အသတ်မဲ့ရှိသောရေသန့်။
အရေးကြီးချက် - ရွေးချယ်ထားသောအချိုရည်၏ ၂ လီတာကိုသင်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းပြင်ဆင်ရန်လိုအပ်သော်လည်းသန့်ရှင်းသောရေကိုမမေ့သင့်ပါ။
မီနူးတစ်ခုကိုရေးသောအခါအမျိုးမျိုးသောပါဝင်ပစ္စည်းများကို "ပန်းကန်" တစ်ခုတွင်ပေါင်းစပ်နိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်သင်ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်သစ်သီးများနှင့်စမ်းသပ်ပြီးအရသာအမျိုးမျိုးကိုအထောက်အကူပြုနိုင်သည့်သဘာဝအမွှေးအကြိုင်များကိုလည်းစမ်းကြည့်နိုင်သည်။
ထူးခြားထူးခြား။ ၁၀ ရက်ကြာသောက်သောအစားအစာရှိသည်။
မီနူးသည်၎င်း၏အမျိုးမျိုးကိုမအံ့သြပါ။ ခန္ဓာကိုယ်ကလိုအပ်သောအာဟာရအားလုံးကိုမရရှိနိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့်ဤနည်းလမ်းကိုသင်လိုက်နာပါကသင်၏သုခချမ်းသာကိုစဉ်ဆက်မပြတ်စောင့်ကြည့်ရမည်၊ ယခင်အစားအစာကိုပြန်သွားပါ
အစားအသောက်၏အမည်မှာချောကလက်သောက်ခြင်းဖြစ်သည်။၁၀ ရက်တာကာလအတွင်းစင်ကြယ်သောရေ၊ ရေတွင်ပြုတ်ထားသောကိုကိုး (သို့မဟုတ်) နို့ထွက်ပစ္စည်းနှင့်မှောင်မိုက်။ ခါးသောထုတ်ကုန်မှထုတ်လုပ်သောချောကလက်ပူများကိုသာသောက်ရန်အကြံပြုသည်။အချိုရည်များကိုသကြားမပါဘဲပြင်ဆင်ထားသော်လည်းသစ်ကြံပိုးနှင့်အခြားအမွှေးအကြိုင်များကိုထည့်နိုင်သည်။ထိုသို့သောမီနူးသည်မည်သည့်အစားအစာအတွက်မဆိုအရေးကြီးသောအာဟာရနှင့်မြှင့်တင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ပြိုကွဲခြင်းအန္တရာယ်ကိုလျော့နည်းစေသည်။
အရေးကြီးချက်။တစ်နေ့ကိုကိုကိုး (သို့) ချောကလက်အချိုရည် (၇) ခွက်ထက်မနည်းဘဲသောက်သုံးနိုင်ပါတယ်။
အနည်းဆုံး ၁၀ ပတ်တင်းကျပ်သောသောက်သုံးသောအစာမစားမီတစ်ပတ်အလို၌သင့်တင့်လျောက်ပတ်သောအစာအာဟာရသို့ပြောင်းလဲသင့်သည်။အစပိုင်းမှာတော့ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ကုန်ပစ္စည်းများဟာမီနူးမှာရှိနေပေမယ့်သင်ဟာချက်ပြုတ်ခြင်း၊ ထမင်း၊ မုန့်ဖုတ်ခြင်း၊အစားအစာအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှု၏ပထမဆုံး နေ့မှစ၍၊ အရည်များများသောက်ရန်လိုအပ်သည်။
အရေးကြီး:သင်တစ်နေ့ ၄-၆ ကြိမ်စားရန်လိုအပ်ပြီး၊ နောက်ဆုံးညစာကိုအိပ်စက်ချိန်တွင်ချဉ်သောနို့သောက်ခြင်းသို့မဟုတ်ဆေးဖက်ဝင်အပင်များ (အိပ်ရာမဝင်ခင် ၂-၃ နာရီ) ပေးသည်။
အစားအစာကိုမစတင်ခင်နောက်ဆုံးသောနေ့၌မီနူးတွင်အစာအရည်သည်အသင့်ရှိသင့်သည်၊ အစိုင်အခဲတစ်ခုခုသာစားနိုင်သည်၊ တခါ။
အစားအစာမှထွက်ခြင်းသည်တဖြည်းဖြည်းဖြစ်သင့်သည်။ကျနော်တို့ကဝင်ပေါက်ပြောင်းပြန်နိုင်ရန်အတွက်သာထပ်ခါတလဲလဲကြောင်းပြောနိုင်ပါတယ်။အစားအစာအရည်ပမာဏတဖြည်းဖြည်းကျဆင်းလာပြီးအစိုင်အခဲအစာတိုးပွားလာသည်။၁၀ ရက်တာအစာမှထွက်သောအရာသည်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာသုခနှင့်လိုချင်သောရလဒ်ပေါ် မူတည်၍ ၁၀-၁၄ ရက်ရှိသင့်သည်။
နေ့စဉ်ကယ်လိုရီစားသုံးမှုကိုတနေ့လျှင် ၃၀-၅၀ ကီလိုဂရမ်တိုး။ တိုးမြှင့်သင့်သည်။တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, သင်သည်ချက်ချင်းအသားသို့မဟုတ်အသားပြုတ်ကြက်ဥအပေါ်ထိတွေ့သင့်ပါဘူး - ခန္ဓာကိုယ်ထိုကဲ့သို့သောအစားအစာကနေအနည်းငယ်နို့ဖြစ်ပါတယ်, ထို့ကြောင့်, ပရိုတိန်းအစားအစာများအကြား, ကပထမ ဦး ဆုံးပဲ, ပဲပုပ်, နို့နှင့်အိမ်တွင်းဒိန်ခဲကိုရွေးချယ်ခြင်းသာ။ ကောင်း၏။
သက်ရှိတစ်ခုချင်းစီသည်တူညီသောအစားအစာနှင့်ကွဲပြားစွာတုံ့ပြန်ကြသည် - အချို့သည်သူတို့၏ကိန်းဂဏန်းကိုသိသိသာသာပြင်ပေးနိုင်ပြီးအချို့ကမူဖောဖျက်ခြင်းကိုဖယ်ရှားပစ်သည်။၁၀ ရက်ကြာသောက်သုံးသည့်အစာ၏အာနိသင်ကိုကန ဦး အလေးချိန်၏လွှမ်းမိုးမှုကလွှမ်းမိုးလေလေ၊ ၎င်းသည်ပိုမိုဆုံးရှုံးလေဖြစ်နိုင်သော်လည်းနောက်ဆုံးကီလိုဂရမ်မှာမူအခက်အခဲများနှင့်အမြဲတမ်းပျောက်ကွယ်သွားသည်။
ပျှမ်းမျှအားဖြင့်၊ ၁၀ ရက်တာအစာအာဟာရရှိလျှင်ကိုယ်အလေးချိန် ၅-၇ ကီလိုဂရမ်ကိုသင်ဖယ်ရှားနိုင်သည်။ အချို့သည်အနုတ် ၁၀ ကီလိုဂရမ်အနိမ့်အမြင့်ကိုဖြတ်ကျော်နိုင်သည်။ကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်းသည်ပထမရက်အနည်းငယ်အတွင်းဖြစ်လိမ့်မည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ခန္ဓာကိုယ်သည်အရည်များနှင့်အူလမ်းကြောင်းများတွင်ပါဝင်မှုများလွန်းခြင်းကြောင့်အပိုပေါင်များများမချန်ထားဘဲဖြစ်သည်။
ရရှိသောအကျိုးသက်ရောက်မှုပေါ် မူတည်၍ လူများသည်အစားအစာကိုကွဲပြားစွာတုံ့ပြန်လိမ့်မည်။သူမသည် ၁၀ ရက်၊ အလေးချိန်သည်အစမတိုင်မီ ၆၁ ကီလိုဂရမ်၊ ဘွဲ့ရပြီးနောက်အလေးချိန် ၅၅ ကီလိုဂရမ်ရှိသည်။ငါမီနူးအကြောင်းကိုသိပ်အနှောက်အယှက်မပေးခဲ့ပါဘူး, ငါမူးခဲ့သမျှကိုငါသောက်၏။ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေလုပ်တယ်၊ အရောအနှောတွေနဲ့ကြိတ်လိုက်တယ်၊ သစ်သီးနဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကနေဖျော်ရည်ကိုညှစ်လိုက်တယ်၊ အစားအစာချောမွေ့အောင်လုပ်တယ်။
ဒီသုံးသပ်ချက်ကိုအခြားမိန်းကလေးတစ်ယောက်ကစွန့်ခွာခဲ့သည် -“ ဒီဟာကစွန့်စားချင်တဲ့သူတွေအတွက်အစားအစာပဲလို့ငါယုံကြည်စိတ်ချစွာပြောနိုင်တယ်။သူတို့သည်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နှင့်အတူထိုင်။ ရလာဒ်များကိုနေ့တိုင်းမျှဝေခဲ့ကြသည်။တစ်နေ့လျှင် ၁-၁. ၂ ကီလိုဂရမ်ခန့်ရှိသည်။ဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းမရှိဘူး၊ ဒါပေမယ့်နောက်ဆုံးတော့ငါ့ရဲ့ကျောက်ကပ်နာကျင်လာပြီးသူငယ်ချင်းကအစာအိမ်အဆင်မပြေမှုကိုညည်းညူခဲ့တယ်။အစားအစာဟာထိရောက်မှုရှိပေမဲ့စိတ်ချရလား။
၁၀ ရက်ကြာသောက်ခြင်းဟာမျှတမှုမရှိပါဘူး၊ ဆရာဝန်တွေကသိပ်မကြိုက်ဘူး၊ ဒါကသင့်ကိုအံ့သြစေတယ်။ဒီနည်းကကိုယ်အလေးချိန်မြန်မြန်လိုချင်တဲ့သူတွေကိုကူညီပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်ကိုယ်အလေးချိန်ကျဖို့အတွက်ဆင်ခြင်တုံတရားနည်းတဲ့နည်းလမ်းတွေအတွက်အချိန်အလုံအလောက်ရှိရင်အချည်းနှီးမဖြစ်တာပိုကောင်းပါတယ်။
စာဖတ်သူရဲ့ "၂. ၅ လအတွင်းငါ ၁၈ ကီလိုဂရမ်ဘယ်လောက်ဆုံးရှုံးခဲ့သလဲ"ကျွန်တော့်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာအဆီပိုများလာပြီးကိုယ်အလေးချိန်တက်လာတယ်။အဝတ်အထည်စတိုးဆိုင်များတွင်၊ အသက် ၂၅ နှစ်အရွယ်တွင် XL သို့ ပြောင်းလဲ၍ ဆက်လက်ကြီးထွားနေသော L အရွယ်အစားကိုရွေးချယ်ခဲ့သည်။ကျွန်ုပ်၏ ၃၀-၃၅ အပိုပေါင်ကိုအဘယ်သို့တိုက်ဖျက်ရန်ကြိုးစားခဲ့သည်ကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာပြောပြနိုင်သည်။ အစားအစာ၊ ငတ်မွတ်မှု၊ ကာယလှုပ်ရှားမှု၊အဆိုပါအကျိုးသက်ရောက်မှုခဏတာသို့မဟုတ်လုံးဝပျက်ကွက်ခဲ့သည်။တိုတိုပြောရရင်စိတ်ပျက်အားလျော့ခြင်း၊ဒါပေမယ့်တစ်နေ့မှာတော့မင်းကကိုယ်အလေးချိန်ကျအောင်ကူညီပေးနိုင်တဲ့ချောကလက်ဘားတစ်ခုနဲ့တွေ့တယ်။ဒါဟာငါ့ကိုကြိုးစားဖို့ဘာမှမကုန်ကျခဲ့ဘူး - ငါချောကလက်ချစ်ကြတယ်။ငါကအမိန့်များနှင့်စားကြ၏။ထိုအခါအလေးချိန်ချရောက်ခဲ့တဲ့ !! ဒါဟာလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သလိုပဲ၊ငါဒီကိစ္စကိုစလေ့လာခဲ့ပြီးအဲဒါအားလုံးဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာနားလည်ခဲ့တယ်။အချင်းမိန်းမတို့၊ငါ 2.5လအတွင်း 18 ကီလိုဂရမ်ချပစ်ကြပြီ။ထိုအခါငါဆက်လက်။ဒါကသင့်အပေါ်မှာသာမူတည်သော်လည်းသင်အလေးချိန်မှအပမည်သည့်အရာမျှမဆုံးရှုံးနိုင်ပါ။
ကိုယ်အလေးချိန်ကျသည့်ဖရဲသီး5 ရက် Menu ကို
ကိုယ်အလေးချိန်ကျသည့်ဖရဲသီး၊ ကိုယ်အလေးချိန်ကျသည့်ဖရဲသီး၊ ၅ ရက်၊ မီနူး ၁ ရက် - အစားအစာအစ၊နေ့ ၂ - လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်၊ ၃ ရက် - အစားအစာအလယ်၊နေ့ ၄ - ပန်းတိုင်နှင့်နီးသည်၊ ၅။ အစားအစာမှထွက်ခွာသည်။အရေးကြီးသောသတင်းအချက်အလက်။
21 မတ်လ 2021
ပန်ကရိယရောင်ခြည်ဖြင့်မည်သည့်အရာကိုတိတိကျကျစားနိုင်သနည်း - အသေးစိတ်ထုတ်ကုန်များအားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း
ပန်ကရိယနှင့်အတူသင်ဘာတိတိကျကျစားနိုင်သလဲ - အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၊ ပန်ကရိယနှင့်အတူအဘယ်သို့စားနိုင်သည်၊ မည်သည့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များစားနိုင်သည်၊ ပန်ကရိယနှင့်အတူသင်စားနိုင်သောသစ်သီးနှင့်သစ်သီးများ၊ ။
7 မတ်လ 2021
အစာအိမ် gastritis နှင့်အတူမစားနိုင်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်: အစားအစာများစာရင်း
အစာအိမ် gastritis နှင့်အတူအဘယ်အရာကိုမစားနိုင်, အစာအိမ် gastritis များအတွက်အထွေထွေအစားအစာအကြံပြုချက်များ, gastritis နှင့်အတူမစားနိုင်အဘယ်သို့, hypoacid gastritis နှင့်အတူတားမြစ်ထားသောအစားအစာများ, gastritis နှင့်အတူစားနိုင်, gastritis နှင့်အတူအစာငတ်နိုင်ပါတယ် ။
မှာယူရန် Keto Eat&Fit 50% အထူးလျှော့စျေး
ကိုယ်အလေးချိန်အတွက် BHB ရှုပ်ထွေးသော Keto အစားအစာ